Namoaka horonantsary an'ny Samsung Galaxy S8 | Androidsis
Lahatsary tafaporitsaka an'ny Galaxy S8 ho avy Samsung
Ny fantsona YouTube MobileFunTV dia nandefa horonantsary voalaza fa tafaporitsaka momba izay niseho Samsung Galaxy S8 miasa tanteraka. Amin'ity horonantsary ity, izay maharitra segondra vitsy monja dia afaka mahita finday finday fotsy izay toa mitovy amin'ny hitantsika hatrizay tamin'ny alàlan'ny sary voasivana Galaxy S8 teo aloha ianao.
mahaliana tafaporitsaka ilay video tamin'ny andro nanombohan'ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday 2017 Barcelona izay nanapahan-kevitr'i Samsung ny tsy hanolorany ny sainam-bolony vaovao, angamba tsy ho very laza eo alohan'ireo filokana vaovao amin'ny fifaninanana Android toa ny LG na Huawei, izay fahombiazana tanteraka amin'ny famerenana tsara.
Na dia navoakan'i MobileFunTV tsy manome fampahalalana vaovao momba ny Samsung Galaxy S8 sy S8 Plus manaraka, ny sariny dia ho fanamafisana ireo vinavina sy tsaho taloha fa hahita isika Smartphone finday an-tsisiny, avia, saika tsy misy frame, ary miaraka tsy fisian'ny bokotra fanombohana ara-batana eo aloha. Ireo sensor dia ho hita eo ambonin'ny terminal ary azo inoana fa misy a Iris scanner.
Ny fampidirana scanner iris ao amin'ny Samsung Galaxy S8 vaovao dia tombantombana madio satria tsy misy na inona na inona mahatonga an'io fampahalalana io ho ofisialy, na izany aza, safidy iray izay "hamafisina" amin'ilay horonan-tsary Slashleaks farany teo izay azonao jerena eto ambany ihany koa.
Na dia naleon'i Samsung niandry hatramin'ny faran'ny volana martsa aza mba hanolotra ny andalana vaovao an'ny smartphone Galaxy S8, dia naniry ny ho eo amin'ny MWC any Barcelona izy hanolotra ny taranaka vaovao amin'ny tablety, ny Galaxy Tab S3, izay nambarako anao ny antsipiriany rehetra eto amin'ny ora voalohany maraina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Lahatsary tafaporitsaka an'ny Galaxy S8 ho avy Samsung
ZTE dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy vaovao, Blade V8 Mini ary Lite mora vidy kokoa ao amin'ny MWC 2017
ZTE Blade V8, fanadihadiana sy hevitra